आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ वैशाख ०७ गते शनिबार - Purbeli News
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ वैशाख ०७ गते शनिबार
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ०७, २०७६ समय: ६:३२:५२
वि.सं. २०७६ वैशाख ०७ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अप्रिल २० तारिख, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, स्वाती नक्षत्र, तुला राशिको चन्द्रमा, वज्र योग, कौलव र तैतिल करण, आजको चाडपर्व र उत्सव : विशालनगर काठमाडौंमा वैष्णवी देवी यात्रा, ललितपुरमा मत्स्येन्द्रनाथ स्नान (बुँगन्हव), आजको मूहुर्त : शुभविवाह, रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), ग्निवास(होमादि), गृहारम्भ (घरको जग राख्ने), वास्तुमुहूर्त, त्रिपुष्कर योग साँझ ०७ बजेर २५ मिनेटपछि, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : छन्द दिवस, त्रिपुष्कर योग दिउँसो २ बजेर २९ मिनेटसम्म, भोलिको मूहुर्त : शुभविवाह, अग्निवास(होमादि), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, दीक्षाग्रहण,
राहु काल : बिहान ०८:५० देखि १०:२७ सम्म, यमघण्ट : दिउँसो ०१:४० देखि ०३:१७ सम्म, गुलिक काल : बिहान ०५:३७ देखि ०७:१४ सम्म, काल वारवेला : बिहान ०५:३७ देखि ०७:१४ सम्म र साँझ ०४:५४ देखि ०७:५४ सम्म
शुभ वारवेला : बिहान ०७:१४ देखि ०८:५० सम्म, अमृत वारवेला : दिउँसो ०३:१७ देखि ०४:५४ सम्म, भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने पान वा घिउ खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । पञ्चाङ्गखण्ड समाप्त भएको छ, यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ ।
सातौं भावमा चन्द्रमा भए पनि सामान्यतया मिश्रित प्रभाव भएको समय छ । व्यापार–व्यवसायमा सामान्यतया लाभै हुनेछ । आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ भने लगनशीलताले फाइदा हुनेछ । आकस्मिक यात्राको सम्भावना छ । बेलामा होश नपुग्नाले खर्च मात्र हुनेछ अनि खर्च गरेर पनि गतिलो प्रतिफल पाउन सकिने छैन । प्रलोभन देखाउनेहरूले फँसाउन सक्छन् । शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ । नयाँ समाचारले खिन्नता बढाउने छ । पठनपाठनमा रुचि जाग्दैन । दाम्पत्य जीवनमा किचलोको सम्भावना पनि छ । परिवारजन टाढिन सक्छन् ।
सामाजिक काम र परोपकारी कामबाट नाम, दाम र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिने राम्रो दिन छ । रोकिएका कामलाई पुनः सुरु गर्ने वातावरण मिल्नेछ । सहयोगीहरूले अप्रत्यासित ढंगले सहयोग गर्नेछन् । आर्जित धन सञ्चय गर्ने वा दीर्घकालिक प्रयोजनमा उपयोग हुनेछ । पुराना समस्या र कठिनाइलाई उचित कार्ययोजना र आत्मबलका कारण समाधान गरि छाडिने छ । प्राज्ञिक क्षमता बढ्ने छ । हक र अधिकारको संरक्षणको प्रयास हुनेछ । धैर्य एवं लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् भने रोकिएका काम पुनः प्रारम्भ गर्न सकिने छ । परिवारजनका आकाङ्क्षा पनि पूरा गर्न सकिने छ ।
धनभावमा चन्द्रमा भए पनि मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ । व्यवसायको सन्दर्भमा टाढाको यात्राको सम्भावना देखिन्छ । सोचेको काम बनाउन अनायासै खर्च बढाउनु पर्ने हुनसक्छ । वैदेशिक यात्रा वा कामकाजबाट भनेजस्तो फाइदा लिन सकिने छैन । जतिबेला पनि मनमा डर र त्रासको निवास हुने भय छ । मनको निराशाभाव र आत्मबलको कमीले गर्नै पर्ने काममा बाधा पुग्नसक्छ । अनुभवीको सल्लाह लिएर दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिने समय छ । करकुटुम्बसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउन दिनु हुँदैन । चाहेको ठाउँमा स्थानान्तरण हुन वा टाढाको यात्रा गर्न नसक्दा खिन्नता बढ्न सक्छ ।
आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन होला । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि तथा पशुपालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिने छ । स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ । रोकिएका काम बन्नाले मनग्ये लाभ हुनेछ । द्वेष वा ईष्र्या गर्नेहरूले हार खानेछन् । चुनौती पन्छाएर पनि काम बनाउन सकिने छ । संघर्ष गरेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिने समय छ ।
आलस्यपनले काममा ढिलासुस्ती हुनसक्छ । उत्साह र जाँगरमा कमी देखिने छ । आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूले सताउन सक्छन्, सचेत रहनुहोला । लगानी र श्रमको उचित मूल्य नपाइने समय छ । स्वास्थ्यमा कमजोरी महसुस हुनेछ । अरूको विश्वास जिते पनि आफन्तबाट धोका हुनसक्छ । समयमा होसियार बन्न नसक्दा खर्च मात्र हुनेछ । आम्दानीका तुलनामा खर्चको मात्रा बढ्ने योग छ । प्रयत्न गर्दा पनि उपलब्धि उठाउन मुस्किल पर्नेछ । शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ । परिवारजनसँग भावनात्मक दूरी बढ्न सक्छ । सानो त्रुटिका कारण ठूलो विवादमा परिन्छ ।
आज कर्मक्षेत्रको चन्द्रमाको बल थोरै छ, त्यसैले परिस्थितिमा केही असहजता बढ्न सक्छ, मनमा चिन्ता, शङ्का र छटपटी उब्जने छ । पिताको सेवासुश्रुषामा समय दिनु राम्रो हुनेछ । कृषिकर्म र व्यावसायिक काममा केही लगानीपछि फाइदा हुनेछ । सानातिना काम र घरेलु समस्यामा अल्झनुपर्ला । स्वास्थ्यमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ । कठिन चुनौती सामना गर्नुपर्ला । नयाँ काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन । तर हिम्मत र साहसका साथ संयम भई कर्म गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि केही काम बन्नेछन् । कामले अरूलाई प्रभावित पारेर फाइदा लिन सकिने छ । कीर्तिमानी काम सम्पादन होला ।
भाग्यमा बलियो चन्द्रमाको उपस्थिति भएको राम्रो दिन छ, आज । हाँकेका र ताकेका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । भाग्यले नसोचेको फाइदा दिलाउन सक्छ । भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ । मङ्गलमय कृत्य सम्पादन गर्ने समय छ । तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ । रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन् । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । धेरैले तारिफ गर्नेछन् । कीर्तिमानी काम सम्पादन हुनसक्छ ।
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ मंसिर १० गते मङ्गलबार
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ मंसिर ०९ गते सोमबार